အမေရိကန် တက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်သေဆုံးများသယ်ဆောင်လာစဉ် (နိုဝင်ဘာလ ၁၆၊၂ဝ၂ဝ)
ပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းပတ်က WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကနေ Remdesivir ကို ကိုဗစ်လူနာကုသတဲ့နေရာမှာ အသုံးမပြုဖို့ တားမြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပေမယ့် အမေရိကန်မှာ ဒီဆေးကို တရားဝင် ဆက်ပြီးအသုံးပြုနေတာပါ။
လက်ရှိ COVID-19 ကုသမှုနဲ့ ကာကွယ်ဆေး နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDC မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဒေါက်တာမင်းမင်းစိုး ကို မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင် ။ ။ အမေရိကန်မှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကု သပေးနေတဲ့ အဓိက Remdesivir ဆေးကို အခုဒီရက်ပိုင်းမှာ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က တားမြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒါဆို အမေရိကန်မှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကို ဘာဆေးတွေနဲ့ ကုသပေးနေလဲဆရာ။ နောက်ပြီး Remdesivir ဆေးကို ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်အပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါလဲဆရာ။
ဒေါက်တာမင်းမင်း ။ ။ ကိုဗစ်ကုသတာကတော့ လူနာရဲ့အခြေအနေအပေါ်မှုတည်ပြီး ကု သမှုတွေကမတူပါဘူး။ အများစုက သာမန်တုပ်ကွေးဖြစ်သလိုမျိုး ချောင်းဆိုး အဖျားတက် တော်ရုံတန်ရုံဆေးသောက်ပျောက်သွားတာပဲ။ အဲလိုမျိုးဆို အခုနကပြောတဲ့ Remdesivir ကို ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး။ ကျနော်တို့ကြောက်တာက ဆေးရုံတက်ရလောက်အောင် အသက်ရှုကြပ်လာပြီး အဆုပ်ထိခိုက်မူများလာတာမျိုးဆိုရင် ကုသရတယ်။ ဆေးရုံတက်တဲ့သူတိုင်းကို Remdesivir ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူနာရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှုတည်ပြီး Anti-Viral Remdesivir ပေးရတာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၆) လ (၇) လ လောက်က အဲဒီဆေးနဲ့ကုကြည့်တော့ ဆေးရုံတွေမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ Anti-Viral ရဲ့ သဘောက သူကပျော့တယ်။ သူရဲ့အာနိသင်က ပျော့ပျော့ပဲထုတ်လို့ရတယ်။ ပြင်းအားများရင် ဗိုင်းရပ်ကိုတင်သာမက လူနာကိုပါသတ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မိုလိုကျနော်တို့က ကာကွယ်ဆေး Vaccine ကိုမျှော်နေကြရတာ။ သစ်မရခင်မှာ ၀ါးနဲ့ ကွပ်သလိုပေါ့။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေးမရခင်မှာ Remdesivir နဲ့ ထိန်းကု ဖို့ကြိုးစားနေရတာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆေးက ရာနှုန်းပြည့် ကုနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကက ဆေးရုံမှာ လူနာအရေအတွက် လျော့ချနိုင်ရေး ဒီဆေးနဲ့ ကုတဲ့အခါမှာ လူနာတွေ မြန်မြန် ဆေးရုံးက ဆင်းနိုင်မယ်။ ဆိုတော့ နောက်ထပ် လူနာအသစ်တွေကို ပိုပြီးလက်ခံဖို့ အခွင့်အရေးပိုပြီးရလာမယ်။ အဲဒီအနေထားနဲ့ Remdesivir ကို ရောဂါနဲနဲ ပြင်းထန်မှုရှိတဲ့လူနာတွေကို ကျနော်ပေးပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင် ။ ။ ကာကွယ်ဆေးတွေထွက်လာမယ့် အနေအထားရောဆရာ။ Pfizer တို့ Moderna တို့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရ သူတို့ထုတ်လုပ်မဲ့ဆေးတွေက ထိရောက်မှု (၉၅)ရာခိုင်နှုန်းကျော်တောင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ မျှော်လင့်ချက်က ဘယ်လိုရှိပါလဲ။
ဒေါက်တာမင်းမင်းစိုး ။ ။ မျှော်လင့်ချက်က အားရစရာကောင်းပါတယ်။ တစ်အချက်က လူတွေကို ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေဘူး။ နှစ်အချက်က (၉၅)ရာခိုင်နှုန်းထိရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။Pfizer က အစားအစာနဲ့ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ FDA ကို သောကြာနေ့က တင်လိုက်ပါပြီ။ ပြီးရင် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDC နဲ့ တနိုင်ငံလုံးက ကျန်းမာရေးဌာနတွေ၊ ဆရာဝန်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Vaccine Advisory Committee ကာကွယ်ဆေး ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မတီ က ပြန်သုံးသပ်မယ်။ အဲဒီလိုအဖွဲ့စည်းတွေက ကြေနပ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့ ကာကွယ်ဆေးကိုဖြန့်ဝေတော့မှာပေါ့။ အဲဒီလိုပါပဲ Moderna ကာကွယ်ဆေးလည်း ခွင့်ပြုမိန့်တင်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင် ။. ။ အခုဆိုရင် အမေရိကန်မှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူက (၂)သိန်းကျော်နေပြီ။ ဒါကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်တွေရှိနိုင်မလဲ။
ဒေါက်တာ မင်းမင်းစိုး ။ ။ ကာကွယ်ဆေးက FDA ခွင့်ပြုမိန့်ရပြီဆိုတာနဲ့ စထုတ်တော့မယ်။ ချက်ချင်းကြီးအများကြီးထုတ်မရတဲ့အတွက် အချိန်ပေးရပါမယ်။ တကမ္ဘာလုံးအတွက်ဆိုရင် ရှေ့နှစ်ဆောင်းရာသီအထိအချိန်ပေးရမယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီဆိုရင် ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းကလည်း ပိုမြင့်လာတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ့နှစ် ဆောင်းရာသီမတိုင်ခင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ။ အများစုမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ရင် အများကြီးအန္တရာယ်လျော့သွားပါပြီ။ ဗိုင်းရပ်အနေနဲ့ အသက်ရှင်ဖို့သိပ်မလွယ်တော့ဘူး။ ဥပမာ- ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူက အယောက် (၇၀)၊ မထိုးထားတဲ့သူက အယောက် (၃၀) ဆိုရင် ဒါသိပ်ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ လူအများကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ရင် ဒီကပ်ရောဂါကြီးက တဖြေးဖြေးပျောက်သွားမှာပါ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDC မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဒေါက်တာမင်းမင်းစိုး ကို မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့ သတငျးပတျက WHO ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကနေ Remdesivir ကို ကိုဗဈလူနာကုသတဲ့နရောမှာ အသုံးမပွုဖို့ တားမွဈကွောငျး ကွညောလိုကျပမေယျ့ အမရေိကနျမှာ ဒီဆေးကို တရားဝငျ ဆကျပွီးအသုံးပွုနတောပါ။
လကျရှိ COVID-19 ကုသမှုနဲ့ ကာကှယျဆေး နောကျဆုံးအခွအေနတှေနေဲ့ပတျသကျလို့ အမရေိကနျ ပွညျထောငျစု ကူးစကျရောဂါထိနျးခြုပျရေးဌာန CDC မှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဒေါကျတာမငျးမငျးစိုး ကို မအငျကွငျးနိုငျက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မအငျကွငျးနိုငျ ။ ။ အမရေိကနျမှာ COVID-19 ကပျရောဂါကု သပေးနတေဲ့ အဓိက Remdesivir ဆေးကို အခုဒီရကျပိုငျးမှာ WHO ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့က တားမွဈကွောငျးကွညောလိုကျပါတယျ။ ဒါဆို အမရေိကနျမှာ COVID-19 ကပျရောဂါကို ဘာဆေးတှနေဲ့ ကုသပေးနလေဲဆရာ။ နောကျပွီး Remdesivir ဆေးကို ကနျ့သတျတားမွဈခကျြအပျေါဘယျလိုမွငျပါလဲဆရာ။
ဒေါကျတာမငျးမငျး ။ ။ ကိုဗဈကုသတာကတော့ လူနာရဲ့အခွအေနအေပျေါမှုတညျပွီး ကု သမှုတှကေမတူပါဘူး။ အမြားစုက သာမနျတုပျကှေးဖွဈသလိုမြိုး ခြောငျးဆိုး အဖြားတကျ တျောရုံတနျရုံဆေးသောကျပြောကျသှားတာပဲ။ အဲလိုမြိုးဆို အခုနကပွောတဲ့ Remdesivir ကို ဘာမှစဉျးစားစရာမလိုပါဘူး။ ကနြျောတို့ကွောကျတာက ဆေးရုံတကျရလောကျအောငျ အသကျရှုကွပျလာပွီး အဆုပျထိခိုကျမူမြားလာတာမြိုးဆိုရငျ ကုသရတယျ။ ဆေးရုံတကျတဲ့သူတိုငျးကို Remdesivir ပေးတာမဟုတျပါဘူး။ လူနာရဲ့လိုအပျခကျြပျေါမှုတညျပွီး Anti-Viral Remdesivir ပေးရတာ။ ပွီးခဲ့တဲ့ (၆) လ (၇) လ လောကျက အဲဒီဆေးနဲ့ကုကွညျ့တော့ ဆေးရုံတှမှောဘာသှားတှရေ့လဲဆိုတော့ Anti-Viral ရဲ့ သဘောက သူကပြော့တယျ။ သူရဲ့အာနိသငျက ပြော့ပြော့ပဲထုတျလို့ရတယျ။ ပွငျးအားမြားရငျ ဗိုငျးရပျကိုတငျသာမက လူနာကိုပါသတျသှားနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့မိုလိုကနြျောတို့က ကာကှယျဆေး Vaccine ကိုမြှျောနကွေရတာ။ သဈမရခငျမှာ ဝါးနဲ့ ကှပျသလိုပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ကာကှယျဆေးမရခငျမှာ Remdesivir နဲ့ ထိနျးကု ဖို့ကွိုးစားနရေတာ။ ဒါပမေဲ့ ဒီဆေးက ရာနှုနျးပွညျ့ ကုနိုငျတာမဟုတျပါဘူး။ အဓိကက ဆေးရုံမှာ လူနာအရအေတှကျ လြော့ခနြိုငျရေး ဒီဆေးနဲ့ ကုတဲ့အခါမှာ လူနာတှေ မွနျမွနျ ဆေးရုံးက ဆငျးနိုငျမယျ။ ဆိုတော့ နောကျထပျ လူနာအသဈတှကေို ပိုပွီးလကျခံဖို့ အခှငျ့အရေးပိုပွီးရလာမယျ။ အဲဒီအနထေားနဲ့ Remdesivir ကို ရောဂါနဲနဲ ပွငျးထနျမှုရှိတဲ့လူနာတှကေို ကနြျောပေးပါတယျ။
မအငျကွငျးနိုငျ ။ ။ ကာကှယျဆေးတှထှေကျလာမယျ့ အနအေထားရောဆရာ။ Pfizer တို့ Moderna တို့ရဲ့ပွောဆိုခကျြအရ သူတို့ထုတျလုပျမဲ့ဆေးတှကေ ထိရောကျမှု (၉၅)ရာခိုငျနှုနျးကြျောတောငျရှိနတေယျဆိုတော့ မြှျောလငျ့ခကျြက ဘယျလိုရှိပါလဲ။
ဒေါကျတာမငျးမငျးစိုး ။ ။ မြှျောလငျ့ခကျြက အားရစရာကောငျးပါတယျ။ တဈအခကျြက လူတှကေို ဆိုးကြိုးမဖွဈစဘေူး။ နှဈအခကျြက (၉၅)ရာခိုငျနှုနျးထိရောကျတယျလို့ပွောပါတယျ။Pfizer က အစားအစာနဲ့ ဆေးဝါးထုတျလုပျမှုကွီးကွပျရေးအဖှဲ့ FDA ကို သောကွာနကေ့ တငျလိုကျပါပွီ။ ပွီးရငျ ရောဂါထိနျးခြုပျရေးဌာန CDC နဲ့ တနိုငျငံလုံးက ကနျြးမာရေးဌာနတှေ၊ ဆရာဝနျတှနေဲ့ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ Vaccine Advisory Committee ကာကှယျဆေး ဆိုငျရာ အကွံပေးကျောမတီ က ပွနျသုံးသပျမယျ။ အဲဒီလိုအဖှဲ့စညျးတှကေ ကွနေပျခှငျ့ပွုတယျဆိုရငျတော့ ကာကှယျဆေးကိုဖွနျ့ဝတေော့မှာပေါ့။ အဲဒီလိုပါပဲ Moderna ကာကှယျဆေးလညျး ခှငျ့ပွုမိနျ့တငျတော့မယျထငျပါတယျ။
မအငျကွငျးနိုငျ ။. ။ အခုဆိုရငျ အမရေိကနျမှာ COVID-19 ကပျရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးသူက (၂)သိနျးကြျောနပွေီ။ ဒါကိုကြျောလှားနိုငျဖို့ဘယျလိုမြှျောလငျ့ခကျြတှရှေိနိုငျမလဲ။
ဒေါကျတာ မငျးမငျးစိုး ။ ။ ကာကှယျဆေးက FDA ခှငျ့ပွုမိနျ့ရပွီဆိုတာနဲ့ စထုတျတော့မယျ။ ခကျြခငျြးကွီးအမြားကွီးထုတျမရတဲ့အတှကျ အခြိနျပေးရပါမယျ။ တကမ်ဘာလုံးအတှကျဆိုရငျ ရှနှေ့ဈဆောငျးရာသီအထိအခြိနျပေးရမယျလို့မွငျပါတယျ။ ဆောငျးရာသီဆိုရငျ ကိုဗဈကူးစကျမှုနှုနျးကလညျး ပိုမွငျ့လာတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရှနှေ့ဈ ဆောငျးရာသီမတိုငျခငျ ကာကှယျဆေးထိုးနိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပဲ။ အမြားစုမှာ ကာကှယျဆေးထိုးနိုငျရငျ အမြားကွီးအန်တရာယျလြော့သှားပါပွီ။ ဗိုငျးရပျအနနေဲ့ အသကျရှငျဖို့သိပျမလှယျတော့ဘူး။ ဥပမာ- ကာကှယျဆေးထိုးထားသူက အယောကျ (၇၀)၊ မထိုးထားတဲ့သူက အယောကျ (၃၀) ဆိုရငျ ဒါသိပျကွောကျစရာမလိုတော့ဘူး။ လူအမြားကာကှယျဆေးထိုးလိုကျရငျ ဒီကပျရောဂါကွီးက တဖွေးဖွေးပြောကျသှားမှာပါ။
အမရေိကနျ ပွညျထောငျစု ကူးစကျရောဂါထိနျးခြုပျရေးဌာန CDC မှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဒေါကျတာမငျးမငျးစိုး ကို မအငျကွငျးနိုငျက ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့တာပါ။